:: My Little World ::: July 2008
ကံကောင်းအောင် - မြန်မာထမင်းဟင်း - Dinner Delivery Service
စင်္ကာပူနိုင်ငံက မြန်မာတွေ အတွက် ညစာ (တနင်္လာ - သောကြာ) ထမင်းချိုင့် မှာလို့ ရတဲ့ နေရာတစ်ခုကို သူငယ်ချင်းတွေ သတင်းပေးလို့ သိလိုက်ရတယ်။ အရင်ကလည်း အဲလို service မျိုးရှိတယ် ကြားဖူးပေမယ့် တစ်ခါမှ အသေအချာ မမေးဖြစ်ဘူး။ ဒီတစ်ခါကတော့ သတင်းပေးရုံမက Website Link ပါပေးတယ်။ ၀၁/၀၈/၂၀၀၈ မှာ စတင်ပြီး အိမ်တိုင်ယာရောက် ပို့ ပေးမယ် ရေးထားတော့ အခုမှ စတဲ့ လုပ်ငန်း အသစ်လား၊ အရင်က ကြားဖူးနဲ့တူတူပဲလား သေချာမသိဘူး။
အသားဟင်း ၂ မျိုး ၊ အသီးအရွက် ၁ မျိုး ၊ ဟင်းချို ၁ မျိုး နဲ့ထမင်း ကို တစ်ယောက် S$99 လို့ ပြောပါတယ်။ တစ်အိမ်ထဲက တစ်ယောက်ထက် ပိုမှာရင် တစ်ယောက်စာကို S$85 ပဲပေးရမယ် သိရပါတယ်။ နောက်လ August အတွက် ထမင်းမှာထားတဲ့ သူတွေကို ဒီနေ့31-July-2008 က စပြီး ထမင်းပို့ ပေးတယ်။ ဒီနေ့ က လုပ်ငန်းစတဲ့ ပထမနေ့ အနေနဲ့အခမဲ့ကျွေးတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရတယ်။ ဒီနေ့ပို့ တဲ့ ထမင်းဟင်းတွေက စားရတာ မဆိုးဘူး လို့ပြောတယ်။ သူများအပြောကို ပြန်ပြောပြတာ။ သူတို့ ပို့ တဲ ထမင်းနဲ့ဟင်းကို ကိုယ်မှ မစားဘူးတာ၊ ဟုတ်မဟုတ်တော့ အာမခံနိုင်ဘူး။ စိတ်ဝင်စားလို့အချက်အလက်တွေ သိချင်တယ်ဆို Website မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုဒ်မှာတော့ 1 August to 8 August အထိ ပို့ မယ့် ဟင်းတွေ စာရင်းပေးထားတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး အသေးစိတ် သိချင်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်သာ ဖုန်းဆက်မေး ကြည့်ကြပါ။
တလစာ မှာထားပေမယ့် စားကြည့်ပြီးလို့မကြိုက်လို့ဆက်မစားချင်ရင် မပို့ ရသေးတဲ့ ရက်တွေအတွက် ပိုက်ဆံပြန်ပေးမယ်လို့ရေးထားတာတော့ တွေ့ တယ်။ တစ်ယောက်တည်း မှာစားတာဆို တရက်ကို ၄.၅၀ ကျတယ် ပြောရမယ်။ ထမင်းပို့ တယ်ဆိုတာ အချိန်မှန်ပို့ မှာ၊ ကိုယ်က အချိန်မှန် အိမ်ပြန်မရောက်တော့ မှာစားချင်တယ်ဆိုတောင် မှာစားဖို့အတော် မလွယ်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီက ညစာ ထမင်ဟင်းမှာ စားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆို ဘယ်လို နေသလဲ ဆိုတာလေး သတင်ပေးပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 7/31/2008 08:37:00 PM 1 comments
Candle Light Dinner and Movie ဆိုလို့ဘာ အတွေ့ အကြုံတွေများ ရေးတော့မှာလဲ ဆိုပြီး အရမ်းစိတ်ဝင်စား မနေပါနဲ့ ။ မထူးဆန်းပါဘူး။ ရှေ့ အပတ်က သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ဒင်နာစားပြီး ရုပ်ရှင်သွားတုန်း ပြောဖြစ်ခဲ့၊ ကြုံခဲ့တဲ့အထဲက တချို့ ကို ဒိုင်ယာရီပုံစံ ရေးမလို့ ပါ။
ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ဝယ်ပြီး ဒင်နာ ဘယ်မှာ စားမလဲ ရွေးတာ နောက်ဆုံး ဂျပန်၊ ကုလား၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယား စားတွေ မစားချင်ဘူး ပြောတဲ့ ကျွန်မ စားလို့အဆင်ပြေအောင် ဆိုပြီး ယူရိုပီယမ် အစားအသောက် သွားစားဖြစ်တယ်။ မှောင်နဲ့ မည်းမည်း.. ဖယောင်းတိုင်လေးတွေ ထွန်းလို့ ။ ပထမဆုံး စားဖူးတဲ့Candle Light Dinner လို့ ပြောရမယ်။ ဒီဆိုင် တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး၊ ဒါပထမဆုံးပဲလို့ပြောလိုက်တာ၊ ဘယ်လို ထင်လဲ ကြိုက်လား၊ ဘာညာတွေ ၀ိုင်းမေးကြရော။ လေဟာပြင်လို နေရမျိုးမှာ လေးတဖြူးဖြူး ဖြစ်နေတာတော့ သဘောကျပါတယ်။ မီးရောင်လင်းလင်းနဲ့စားရတာမျိုးမှ မကြိုက်တာတွေ ဖယ်ပြီး ကြိုက်တာတွေ ရွေးစားလို့ ရမှာ၊ ဒီလို မှောင်နဲ့ မည်းမည်း စားရတာကို မနှစ်သက်ဘူး၊ Candle Light Dinner မှာ အရိုးများတဲ့ ငါးဟင်းမျိုး ကျွေးမယ်ဆို ဘယ်လို နေမလဲမသိဘူးလို့မေးလိုက်တာ၊ Romantic မဖြစ်လိုက်တာဆိုပြီး ၀ိုင်းအားပေးကြတယ်။ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာ သာမန်ပြည်သူတိုင်းဟာ ညစာစားတဲ့ အချိန်တိုင်း ဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့စားနေရလို့Candle Light Dinner ဆိုတာမျိုးဟာ ရိုးနေပြီ၊ အထူးအဆန်း မဖြစ်တော့ဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်း သူတို့တွေ ဘယ်သိနိုင် မလဲ။
နောက်တော့ အစားအစာတွေ စောင့်ရင်း Mount Faber ကနေ Sentosa အသွား Cable Car ပေါ်မှာ ဒင်နာ စားလို့ ရတဲ့ အကြောင်း ရောက်သွားတယ်။ Sky Dining အကြောင်းသိချင်ရင် ဒီမှာ ဖတ်လို့ ရပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ စားဖူးလဲပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး တစ်ယောက်မှ မစားဖူးကြဘူး။ ကျွန်မလည်း မစားဖူးဘူး မြင်ပဲ မြင်ဖူးတယ် ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီ ပင်လယ်ပြင်အထက် အမြင့်ပေ ၇၀ မီတာကျော် Cable Car ပေါ်မှာ Sky Dining ဒင်နာ စားရင်း propose လုပ်ကြတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း စကားရောက်သွား ပြန်တယ်။ သူတို့အပြောအရတော့ အဲလို လုပ်တာမျိုး ကောင်မလေးတွေ သိပ်ကြိုက်တယ်ပေါ့။ မကြိုက်ဘူး ကြိုက်တယ် ငြင်းကြရင်း မေးခွန်းက ကျွန်မစီ ရောက်လာ ပြန်တယ်။ အတူသွားတဲ့ အထဲ ပါတဲ့ မိန်းကလေး ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက်က ကလေးတောင် ၁ နှစ်ကျော်ပြီ၊ တစ်ယောက်က ဒီလအတွင်းပဲ ROM မှာ Register လုပ်ပြီး လက်ထပ်ပြီးသား။ ကျွန်မလည်း စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့သူများတော့ မသိဘူး ငါသာဆို အဲလိုစီးရင် အခန့်မသင့်ရင် မူးတတ်တယ်၊ မူးနေရတဲ့ အထဲ မှောင်မှောင် မည်းမည်းမှာ ထမင်းကျွေးပြီး propose လုပ်တယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီလောက်တောင် ငါ့အကြောင်း မသိရကောင်းလား ဆိုပြီး လက်ခံဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ဒါတောင် မလျှော့ကြသေးဘူး။ နင့်ချစ်သူက အဲလိုလာ လုပ်ရင်ရောတဲ့၊ သူကလည်း ဒါမျိုး တစ်သက်လုံး လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဖြစ်တယ်။ နင်တို့ ရော နင်တို့ ကောင်မလေးတွေကို ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြီး propose လုပ်မှာလား ဆိုတော့ မလုပ်ဘူးတဲ့။ ကိုယ်တောင် မလုပ်တဲ့ကိစ္စကို ဘယ်လို ထင်လဲဆိုတာ သူတို့ မို့အလကား အချိန်ကုန်ခံ မေးရတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြား ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူဆို ဒါမျိုးလေးတွေ ကြိုက်တယ်လို့ဝင်ပြောလာလို့ဆက်မငြင်းတော့ပဲ ဖြစ်တော့ဘူး။ စိတ်ဝင်စားမှု့ပြောင်းသွားတာလဲ ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေ မချခင် soup နဲ့ရေအရင်လာချပေးတဲ့အခါမှာ ရေခွက်တွေကိုကြည့်ပြီး အားလုံးသဘောကျသွားလို့ ပါ။ ခြောက်ထောင့် ပုလင်းတွေ။ ဒါတောင် ခွက်မရှိလို့ လား၊ ဆေးရမှာ ပျင်းလို့ လား၊ ဒါ style လုပ်တာလား၊ ဒီပုလင်းတွေကို ဆေးတာ ပြောင်ပါ့မလား ဆိုပြီး ငြင်းကြသေးတယ်။ တခြားသူတွေက ကော်ဖီပဲမှာပေမယ့် ကျွန်မကတော့ ထုံးစံအတိုင်း Coke ပဲ မှာဖြစ်တယ်။ အအေးခွက်လည်း လာချရော အအေးခွက်ကို ကြည့်ပြီး ပိုလို့သဘောကျသွားတာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့စိတ်ကူး ရသွားခဲ့ကြတယ်။ Camera မပါတာနဲ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းကို ယူပြီးရိုက် ဖြစ်တယ်။ စားနေတဲ့ သူတွေ အားလုံးမှာ ကျွန်မတို့ အုပ်စုပဲ သောင်းကျန်နေကြတာ။ ခွက်တွေက အရမ်းမိုက်တယ်။ မရိုက်ပဲ မနေနိုင်ဘူး။
ခွက်တွေကို ရိုက်ပြီးမှာ ကျွန်မ မှာထားတဲ့ အစားအသောက်တွေ ရောက်လာတာနဲ့တခြားသူတွေ ကို စောင့်ရင်း ဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့ကိုယ့်စားမယ့် အစားအစာကို အမှတ်တရဖြစ်အောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သေးတယ်။
ဒင်နာစားပြီး ကြည့်တဲ့ ရုပ်ရှင်က Batman ရုပ်ရှင် "The Dark Knight"။ မဆိုးပါဘူး ကြည့်လို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒင်နာစားတာ များသွားပြီး ဗိုက်တင်း အိပ်ငိုက်နေတာ၊ ဇာတ်လမ်း အရမ်း မဆိုးလို့ သာ ရုံထဲမှာ အိပ်ပျော်မသွားပဲ အပြီးအထိကြည့် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ရုပ်ရှင်က ၃ နာရီနီးပါး (153 mins) တောင်ကြာတယ်။ မကြည့်ခင်က Batman ရုပ်ရှင်ဆိုတော့ PG လို့ဆိုထားပေမယ့် ကလေးတွေအတွက် ဖြစ်မယ်လို့ထင်နေတာ၊ ကြည့်ပြီးမှာ ကလေးတွေ ထက်စာရင် လူကြီးတွေအတွက် ပိုပြီး ရည်ရွယ်တာမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ အတူကြည့်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အဲ့ဒီထဲက အတွေးအခေါ်တွေ ကြိုက်တယ်တဲ့။ ကျွန်မတော့ မသိဘူး၊ စိတ်မ၀င်စားပါဘူး လို့ ပဲ ပြောလိုက်တာ။ မသိဘူးလို့ ပဲ ပြောလို့ ဖြစ်တယ် နားမလည်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင် နားလည်အောင် ရှင်းပြမယ်ဆို စကားကြောရှည် နေအုံးမယ်။ စိတ်မ၀င်စားဘူး ဆိုတော့ ဘာမှ ထပ်မပြောကြတော့ဘူး။ ဒါမှပဲ နားအေးပါးအေး နေရတော့တယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဆိုလို့ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Burma ဆိုတာ ကြားတာနဲ့နင်တို့နိုင်ငံဆိုပြီး အားလုံးဝိုင်းအော်လို့ပတ်ဝန်းကျင်က သတိပြုမိသွားတယ်။ အမှတ်မရပါပဲ။ ရုံထဲက ပြန်ထွက်လာကြတော့ Burma က အတော်နာမည် ကြီးတယ်။ Rambo ထဲမှာ လဲပါတယ်၊ အခု ရုပ်ရှင်မှာလည်း ကြားလိုက်ရတယ် ဆိုပြီး လာပြောနေကြလို့ကောင်းသော နာမည်ကြီးခြင်း မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။
BURMA - Memorable quotes for The Dark Knight (2008)
Source: Memorable quotes for The Dark Knight (2008)
Posted by Nay Nay Naing at 7/31/2008 11:45:00 AM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 7/30/2008 11:05:00 AM2comments
Posted by Nay Nay Naing at 7/29/2008 06:39:00 PM2comments
Kyal Sin Soe Win, Aung Win Myat and Nang Win Ei Chaw.
Master of Science (Computer Integrated Manufacturing)
Looks like you've gotaBright future ahead of you..
Nay Nay + Thiha
Other Rleated Post :
Congratulations to Class of 2008 by SMA
Posted by Nay Nay Naing at 7/28/2008 12:15:00 PM4comments
(အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ (၆) အမှတ် (၁) ၁၉၃၆ ခု)
ဤအမှောင် အတွင်းမှာနေ၍ အနိုင်မခံအရှုံးမပေးတတ်သော
ငါ၏ စိတ်ဓာတ်ကို ဖန်ဆင်းပေးသည့် နတ်သကြားတို့ အား ငါကျေးဇူးတင်၏။
လောကဓံတရားတို့ ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လက်ဆုပ်တွင်းသို့ 
ကျရောက်နေရငြားသော်လည်း ငါကား မတုန်လှုပ် မငိုကြွေး။
ကံတရား၏ ရိုက်ပုတ်ခြင်း ဒဏ်ချက်တို့ ကြောင့်
ငါ၏ ဦးခေါင်းသည် သွေးသံတို့ ဖြင့် ရဲရဲနီ၏ ညွတ်ကားမညွတ်။
ဤလောဘ ဒေါသတို့ကြီးစိုးရာဌါန၏ အခြားမဲ့၌ကား
သို့ သော် ငါ့အား မတုန်လှုပ်သည်ကို တွေ့ ရအံ့
နောက်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မကြောက်သည်ကိုသာ တွေ့ ရအံ့။
သုဂတိသို့ သွားရာ တံခါးဝသည် မည်မျှကျဉ်းမြောင်းသည်ဖြစ်စေ
ယမမင်း၏ ခွေရေပရပိုက်၌ ငါ့အပြစ်တို့ ကို မည်မျှပင်များစွာ
မှတ်သားထားသည် ဖြစ်စေ ငါကား ဂရုမပြု
Posted by Nay Nay Naing at 7/27/2008 05:15:00 PM0comments
မနိုင်းနိုင်း ဘလော့မှာ ရန်ကုန်မှာ ကာတွန်းဆရာတွေက "မုန်တိုင်းမှနိုးထခြင်း" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြပွဲတစ်ခုလုပ်၊ ကာတွန်းပုံတွေကို ရောင်းချပြီး နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များအတွက် ရံပုံငွေရှာတဲ့ ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရ ကတည်းက အဲဒီပွဲက ကာတွန်းပုံတွေကို ကြည့်ချင်နေတာ။ အခု ဧရာဝတီ အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ကာတွန်းပုံတွေ ကြည့်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီမှ ပြတဲ့ ကာတွန်းတွေကို သဘောကျ နှစ်သက်တာကြောင့် သိမ်းထားချင်တာနဲ့PDF ဖိုင် လုပ်ထားလိုက်တယ်။ အခုလို သိမ်းထားလို့ ရမယ် ထင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တွင်ပြသနေသော နာဂစ် ကာတွန်းများ - ဧရာဝတီ
Nagis-Cartoon - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: Nagis-Cartoon
Labels: Cartoons, Myanmar
Posted by Nay Nay Naing at 7/27/2008 11:14:00 AM0comments
ဒီနေ့ပထမဆုံး အတွေ့ အကြုံ အနေနဲ့Singapore Flyer ကို စီးဖူးသွားပြီ။ ကိုယ့်ဟာကိုဆို သွားစီးဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ မိသားစုတွေလာမှ သူ့ တို့ ကို လိုက်ပို့ ရင်းသွားစီးမယ် စိတ်ကူးထားတာ။ ဒီနေ့ တော့ အလုပ်က IT Night (Teambuilding) ဆိုပြီး စီစဉ်တာကြောင့် ရောက်ဖြစ်၊ စီးဖြစ်သွားခဲ့တာ။ ၅း၅၀ မှာ ဘူဖေးစားပြီး၊ ၇း၃၀ လောက် အဲဒီရောက်တယ်။ အဲ့ဒီက ပြန်ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ည ၉ နာရီထိုးပြီ။ အသွားကို အလုပ်က ကားစီစဉ်ပေးတယ်။ အပြန်မှာ အဲဒီကနေ City Hall MRT အထိ ၃၀ မိနစ်ကြာ တစ်ခါ ထွက်တဲ့ Free shuttle bus ရှိတယ်။ Bus က မိုက်တယ်။ ဘေးမှာ အကာ မပါဘူး။
တစ်ဖွဲ့ တည်းကြတဲ့ သူတွေကလည်း မရင်းနှီးတော့ ပျော်ဖို့ မကောင်းဘူး။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ တစ်ခုလုံးကို မိုးပေါ်က ကြည့်ဖူးတာ သွားပဲရှိတယ်။ ကိုယ်မြင်ရတဲ့ အဆောက်အအုံတွေ ဘာက ဘာလဲသိချင်လို့မေးတာကို ဘယ်သူမှလည်း မဖြေနိုင်ဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှာမွေး ဒီနိုင်ငံမှာ ကြီးပြီး အတော်ညံ့တဲ့ သူတွေ။ မသိဘူးဆိုတာကြီးပဲ။ မိုးကလည်း ဖွဲဖွဲလေး ရွာနေသေးတယ်။ အပေါ်က အောက်ပြန်ဆင်းတဲ့ အချိန်တုန်းကဆို ပျင်းလွန်းလို့အမြန်အောက်ကို ရောက်ပါစေလို့ ပဲ ဆုတောင်းမိတယ်။ Camera မပါလို့ကိုယ့်တိုင်ရိုက်ထာတဲ့ ဓာတ်ပုံတော့ ပြစရာမရှိဘူး။ တစ်ဖွဲ့ တည်း စီးတဲ့ သူတွေကလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်တာ မကောင်းကြဘူး။ Group Photo တွေတော့ ရှိတယ်။ အလုပ်မှာ ပြန်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ရမယ် ဆိုလို့အုပ်စုလိုက် ရိုက်ရတာ။ မိုးရွာနေတော့ မှန်တွေပေါ်မှာ ရေစိုနေပြီး ဓာတ်ပုံ ရိုက်ရတာ ခက်တယ်။
Flyer စီးနေတဲ့ အချိန်မှာ သဘောကျသွားတာ ဆိုလို့ကိုယ်မိုးပေါ်ရောက်နေတုန်း ဖုန်းဆက်လာတဲ့ အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်ကို အခု SG Flyer ပေါ်မှာ ရောက်နေတယ် ဆိုပြီး အားပါးတရ ပြောလိုက်ရတာ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ ကြွားပြီး ပျော်လိုက်တာ.. အဲဒီနေ့ က အဲဒီအချိန်မှာ ကွတ်တိ ဖုန်းဆက်လာတဲ့ အစ်ကိုကြီးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါ၏။
Posted by Nay Nay Naing at 7/26/2008 11:33:00 AM2comments
Today is the 9th annual System Administration Day!!!
If you’re able to read this post, THANK your System Administrator!!!
ကျွန်မလည်း အိုင်တီလောကမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုတော့ System Adminstraor တွေရဲ့ အရေးပါပုံ၊ အလုပ်များပုံ နဲ့System/Network မှာ တစ်ခုခု အဆင်မပြေ ဖြစ်တာနဲ့သူတို့ အရင်ပြဿနာ ရှာခံရပုံတွေကို သိနေတယ်။ ကျွန်မတို့Appliction Developement ပိုင်းကလို ပြဿနာကို ဘယ်တော့ ရှင်းပေးမယ် ဆိုတာမျိုး သူတို့ လုပ်လို့ မရဘူး။ ပြဿနာ တစ်ခုခု တတ်ပြီ ဆိုရင် အချိန်ဆိုင်းလို့မရဘူး၊ ချက်ချင်းရအောင် ရှင်းပဲ။ ဒီတော့ SysAdmin တွေဟာ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို 24/7 အလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ အတော်လေး စိတ်ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပဲ။
SysAdmin Day ကို 2000 က စပြီးကျင်းပခဲ့တာ ဆိုတော့ အခုနှစ်ဆို ၉ နှစ်ရှိနေပြီ။ အခုဆို ကမ္ဘာနိုင်ငံ အတော်များများက လူတွေ အသိအမှတ်ပြုနေပြီ။ Official Holiday တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီနေ့ မှာ ကုမ္ပဏီတွေမှာ SysAdmin တွေ ပင်ပန်းမှု့၊ အရေးပါမှု့ တွေကို သတိတရနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြော၊ လက်ဆောင်တွေပေး လုပ်တယ်လို့သိရတယ်။ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ သဘောပေါ့။ အိုင်တီ၊ အင်တာနက် ဆိုတာ ခုခေတ်မှာ လူတိုင်း၊ ကုမ္ပဏီတိုင်း ကင်းကွာလို့ ရတဲ့ အရာမှ မဟုတ်တာ။ ဒီအောက်မှာတော့ နားထောင်ပြီး သဘောကျမိတဲ့ SysAdmin Day အကြောင်း သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ရှယ်ယာလုပ်လိုက်တယ်။
သီချင်းရဲ့ စာသားတွေ နဲ့SysAdmin Day ဘယ်လို စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ် ဆိုတာတွေ သိချင်တယ်ဆို System Administrator Appreciation Day မှာ ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Labels: Day, Technology
Posted by Nay Nay Naing at 7/25/2008 04:25:00 PM2comments
အင်္ဂါနေ့ က အလုပ်က လက်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံး အလုပ်လုပ်တဲ့နေ့့။ ဟိုတစ်နေ့ က အင်ဒိုနီးရှားဆိုင်မှာ ကုမ္ပဏီက Fareware Lunch လုပ်တယ်။ အင်္ဂါနေ့ ကတော့ ကျွန်မတို့အလုပ်မှာ ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ကြီးပဲ Fareware Lunch ထပ်လုပ်ကြတယ်။ အစားအသောက် ရွေးလွန်းပြီး၊ ပုံမှန်စားနေကြ အစားအစာတွေကိုသာ စားလေ့ရှိတဲ့ ကျွန်မကို အစားအသောက် အသစ်အဆန်းတွေ စားတတ်လာအောင် စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ပြောတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်။ နောက်မှ ဒီအလုပ်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်း စိတ်ကူးပေါက်ရင် ရေးမှတ်ထားမယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး ရင်းရင်းနှီးနှီး ခင်မင်မိတဲ့ လူမျိုးခြား သူငယ်ချင်းတွေ...
ပုံမှန်ဆို ကျွန်မ ဂျပန်အစားအသောက် မကြိုက်ဘူး။ အသားကင်ကလွဲရင် တခြား ဘယ်ဂျပန်ဆိုင်မှာမှ မစားဘူး။ ကျွန်မ အကြောင်းသိတဲ့ သူတို့ တွေက ကျွန်မ ပါရင် ဂျပန်အစားအသောက်ကို ရှောင်ပြီး စားကြတယ်။ အဲ့ဒီနေ့ ကတော့ CCY ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် ဂျပန်ဆိုင်မှာ သွားစားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆူရှီကို ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ စားဝင်မှာ မဟုတ်တာ သေချာတာကြောင့် Waraku မှာပဲ သွားစားဖြစ်ကြတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြ စကားတွေပြောကြတဲ့ ဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်တဲ့ Fareware တစ်ခုပါပဲ။
အဲ့ဒီနေ့ က Farewell Lunch သာမက၊ Farewell TeaBreak နဲ့Farewell Dinner ဆိုပြီး လုပ်ကြသေးတယ်။ Lunch နဲ့Tea ကို ကိုယ်စားတာ ကိုယ်ရှင်းစနစ်နဲ့ ပေးကြပြီး၊ Dinner ကိုတော့ Chan Yee က ရှင်းတယ်။ အဲဒီ ညနေက ချိန်းထားတာလေးတွေ ရှိနေလို့Dinner တော့ မသွားနိုင်တော့ဘူး။
Labels: Food, Job, Singapore
Posted by Nay Nay Naing at 7/25/2008 10:54:00 AM0comments
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က IMEEM က သီချင်းတွေ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ချင်တာ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ လာမေးတာနဲ့Google လုပ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒေါင်းလုတ်လုပ်နည်း အတော်များများ ကို တွေ့ ရတဲ့ အထဲက ကျွန်မ Free ရတဲ့ FreeMusicZilla ကို သုံးပြီး စမ်းကြည့်တာ အဆင်ပြေပြေ ဒေါင်းလုတ် လုပ်လို့ ရတာ တွေ့ ရပါတယ်။ FreeMusicZilla ကို သုံးပြီး IMEEM ဆိုဒ်က တင်မကဘူး တခြား Music/Video Share လုပ်လေ့ရှိတဲ့ (Last.fm, Pandora, MySpace, eSnips, MOG, iJigg) က file တွေကိုလည်း download လုပ်လို့ ရတယ် သိရတယ်။
၁။ ပထမဆုံး FreeMusicZilla ကို Download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ။ FreeMusicZilla ရဲ့ Default Setting မှာ ကျွန်မတို့အသုံးများတဲ့ IE နဲ့Firefox ကို ရွေးပြီးသားဖြစ်နေတော့ ဒီနှစ်ခုကိုသာ သုံးမယ်ဆိုရင် ဘာမှ ထပ်ပြောင်းစရာမလိုပဲ Install လုပ်ပြီး တန်းသုံးလို့ ရပါပြီ။
Opera နဲ့တခြား Browser တွေကို သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ Tools --> Preferences ကိုသွားပြီး Monitoring Tap မှာ ကိုယ်အသုံးပြုမယ့် Browser ကို ရွေးပေးရပါမယ်။ How to monitor other browsers
၂။ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့IMEEM ဆိုဒ်ကို သွားပြီး ကိုယ် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ချင်တဲ့ သီချင်းကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဒါဆို အဲ့ဒီ သီချင်းကို FreeMusicZilla ရဲ့ Window မှာ "Waiting for Download" ဆိုပြီး တွေ့ ရမှာပါ။ သီချင်းတွေ အများကြီး နားထောင်ထားရင် အဲ့ဒီ list မှာ အများကြီးတွေ့ ရမှာပါ။ List မှာရှိနေတဲ့ files တွေမှာ "Leach TimeOut"0မဖြစ်ခင်မှာ Download လုပ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ကိုယ် Download လုပ်ချင်တဲ့ file (music/video) ကို ရွေးပြီး အောက်ဆုံးမှာ တွေ့ ရတဲ့ Download Button ကို Click လုပ်လိုက်ရင် ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ file ရဲ့ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နေကြောင်း "Downloading" ဆိုပြီးတွေ့ရပါမယ်။ Download လုပ်ပြီးသွားတဲ့ file တွေကို C:\_Downloads\_ မှာ ရှာလို့ရပါတယ်။
ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရင် ရမယ့် File အမျိုးအစားက FLV (Flash Video) files ပါ။ FLV files တွေကို ဖွင့်ဖို့ ဆို ကျွန်မ Goom Player ကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ flv မလိုချင်လို့mp3 လိုချင်တယ်ဆိုလည်း ပြောင်းလိုက်လို့ ရတာပဲလေ။
English လို ရှင်းထားတာ ဖတ်ချင်တယ်ဆို ဒီမှာ ကြည့်လို့ လည်း ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ရေးထားတာတွေကို ဖတ်ပြီး နားမလည်စရာ မရှိဘူး။ အတော်လေး ရှင်းတယ်။ တကယ်ဆို မြန်မာလို ရှင်းမပြနေနဲ့ဒီတိုင်း Link ပေးလိုက်လည်း ရပေမယ့် ပျင်းတာနဲ့ရှင်းကြည့်တာ။ ရှင်းလိုက်မှ ပိုရှုပ်သွားကြလား မသိဘူး။ :">
Posted by Nay Nay Naing at 7/24/2008 10:20:00 AM5comments
အလုပ်သို့နောက်ကျမှ ရောက်ပြီး၊ စောပြန်လေ့ ရှိကြသူများ အတွက်..
ဒီပုံလေး ကြည့်ပြီး သဘောကျနေတာကြာပြီ။ ကျွန်မ ဒီနေ့ အလုပ်လာတာ နောက်ကျတယ်။ ဒီနေ့မနက် အလုပ်သွားချိန်မှာ မိုးရွာနေလို့မိုးအတိတ်စောင့် လိုက်တာ အလုပ်ကို ၉ နာရီခွဲကျော်မှ ရောက်တယ်။ မနက်က အလုပ်ရောက်တာ နောက်ကျလို့ဒီနေ့စောပြန်မယ်ဆိုပြီး လုပ်လို့ ရရင် ကောင်းမယ်။
ပုံထဲကလိုလည်း နောက်ကျမှ အလုပ်ကို ရောက်တယ်ဆိုရင် စောပြန်ခွင့်ရှိတဲ့.. အလုပ်မျိုးရှိတယ်ဆို အလုပ်ပြောင်းမယ်။ လခကတော့ အခုထက် မနည်းတဲ့ အလုပ်၊ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်မျိုးလည်း ဖြစ်ဖို့ တော့ လိုသေးတာပေါ့။
Posted by Nay Nay Naing at 7/23/2008 03:26:00 PM3comments
ဒီရက်ပိုင်း ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်း။ အသက်ကြီးလာလို့ချူချာတာထင်တယ်။ ဒီက ရာသီဥတုက ချက်ချင်းပူလိုက်၊ ခနနေ မိုးတွေရွာလိုက် ဖြစ်တာတွေကြောင့် ထင်ပါတယ်။ ထီးမယူတတ်တော့ မိုးရွာတိုင်း မိုးနည်းနည်း မိတတ်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လုံးက နေလို့သိပ်မကောင်းတာကြောင့် နေ့ စဉ် အလုပ်သွားပေမယ့် လုပ်စရာတွေ အကုန်ပြီးအောင် မလုပ်နိုင်ဘူး။ နေမကောင်းလို့ခေါင်းကိုက်နေရင် ဘာမှလည်း ရေးလို့ မရ။ စာဖတ်ရင်တောင် ခေါင်းကိုက်လို့စာအုပ်တွေတောင် မဖတ်ဖြစ် သလောက်ပဲ။ အခုတော့ ကျန်းမာရေး နည်းနည်း ပြန်ကောင်းလာပြီ ထင်ရတယ်။ ခေါင်းသိပ် မကိုက်တော့ဘူး။ အစာလည်း စားလို့ ရလာပြီ။ ခေါင်းကိုက်ရင် အစာက စားလို့မ၀င်၊ အစာမရှိတော့ အားနည်းပြီး ခေါင်းပိုကိုက်နဲ့အတော်ခံရဆိုးတာ။
အခု အလုပ်မှာ လုပ်စရာကျန်တာတွေကို ပြီးအောင်ရှင်း နေတယ်။ တခြား လုပ်စရာ ကိစ္စတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းတွေ အလုပ်ရှုပ်မယ်ဆိုတာ သေချာတယ်။ ကျန်းမာရေး မကောင်းရင်သာ၊ ခေါင်းမကြည်လို့ဘာမှ လျှောက်မရေးဖြစ်တာ၊ အလုပ်ရှုပ်တာ လောက်ကတော့ ကွန်ပြူတာရှေ့မထိုင်နိုင်လောက်အောင် ရှုပ်နေတာ မျိုးမဟုတ်ရင် ဟိုရေး၊ ဒီရေး စိတ်ကူးပေါက်တာတွေ ချရေးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 7/22/2008 11:28:00 AM2comments
Labels: Cute, Funny, Quotation
Posted by Nay Nay Naing at 7/19/2008 08:42:00 AM0comments
There'll be good times, And there'll be bad But I will stand beside you
Credit to AKT and Native DJ
Labels: Cute, Lyrics, Music
Posted by Nay Nay Naing at 7/17/2008 10:12:00 AM6comments
Posted by Nay Nay Naing at 7/16/2008 01:08:00 PM4comments
အလုပ်မှာ IT Security Awareness အတွက် သတိရှိရအောင် အမြဲပုံလေးတွေ ပို့ ပေးတတ်တယ်။ ဖုန်းပျောက်လို့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းကို မတောမဆ (တမင်) ပဲဖြစ်ဖြစ် format ချမိလိုက်လို့ဖုန်းထဲမှာ ရှိသမျှ contacts ပျက်ကုန်သူတွေ ... ကွန်ပြူတာမှ ကူးထားတဲ့ data တွေပါ ပျက်ကုန်တော့ ပိုဆိုးတာပေါ့.. ဒီပုံလေး နှစ်ခုကြည့်ပြီး သဘောကျလို့မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်.. :)
Posted by Nay Nay Naing at 7/16/2008 09:51:00 AM2comments
စနေနေ့ က နေ့ လယ်စာကို Diandin Leluk Thai Restaurant (Golden Mile) မှာ စားဖြစ်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ငါးပေါင်း၊ တုံယန့် ဟင်း၊ ဖားသားအကျွတ်ကြော်နဲ့အရွက်ကြော် တစ်ပွဲစားဖြစ်တယ်။ သင်္ဘောသီးထောင်း စားမယ် စိတ်ကူးပေမယ့် မှာထားရဲ့နဲ့နားလည်မှု့ လွဲပြီး လာချမပေးတာနဲ့ထပ်မမှာ ဖြစ်တော့ဘူး။ စားဖို့ ပဲ စိတ်ဝင်စားနေတာကြောင့် ဓာတ်ပုံတော့ မရိုက်ဖြစ်ဘူး။ အရင်တုန်းက ပုံတွေကြည့်ချင်တယ်ဆို ဒီမှာ ကြည့်လို့ ရတယ်။ အဲ့ဒီ ထိုင်းဆိုင်မှာ မြန်မာပြည်ကလူတွေလည်း အလုပ်လုပ်နေတာရှိတော့ မြန်မာလိုပြောပြီး အစားအသောက်မှာလို့ရပါတယ်။ ဆိုင်က အတော်ကြီးတယ်။ နှစ်ဆိုင်တွဲ။ ဆိုင်နံပါတ် ၆၇ နဲ့၇၁။ သွားစားမယ်ဆို ရှာရလွယ်မှာပါ။
ဒါက အခန်းနံပါတ် ၆၇ ရဲ့ပုံ။ ဒီပုံကို အင်တာနက်ပေါ်က ရှာထားတာပါ။
စားပြီးတော့ Ubi က Perfume Warehouse sales ကို သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၄ နာရီလောက် အဲ့ဒီကို ရောက်သွားပြီး ဆိုင်ပိတ်ခါနီး ၆ နာရီလောက်မှ ပြန်ထွက်လာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဟိုရေမွှေးစမ်း၊ ဒီရေမွှေး စမ်းကြည့်နဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ အတော်လေး ခေါင်းမူးနေပြီ။ Perfume Warehouse Sales က ရေးမွှေးတွေ အတော်လေး ဈေးသက်သာတယ်။ နာမည်ကြီး Brand တွေ အများစုက S$38, S$45, S$60, S$70 ဈေး အမျိုးမျိုးပဲ။ $38 နဲ့$45 တွေ အများစုက 100 ml - Tester တွေများတယ်။ Tester တွေဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း ဗူးလှလှ နဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ အဲဒီ ဈေးလောက်ထဲမှာ Tester မဟုတ်တာတဲ့ 50 ml ပုံမှန်ဗူးတွေလဲ ရှိပါတယ်။ $60 နဲ့$70 တန်တွေကတော့ အပြင်မှာ ရောင်းသလိုပဲ ဗူးလှလှလေးတွေနဲ့ထည့်ထားတာတွေပါ။ နောက်ပိုင်းထွက်တာတွေ များတယ်။ အဲဒီက ရေမွှေးဈေးတွေကို Bugis နဲ့Raffle Shopping Center မှာ ဈေးမေးကြည့်တော့ တစ်ဝက်လောက် သက်သာတာ တွေ့ ရပါတယ်။ အပြင်မှာ ၀ယ်သလို တခြားအပို လက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေ မရပေမယ့် ဈေတစ်ဝက်လောက် သက်သာတာကြောင့် ရေမွှေးဝယ်ဖို့စိတ်ကူးရှိရင် သွားကြည့်သင့်တယ်။
Eunos MRT က သွားမယ်ဆို Bus 63 စီးသွားလို့ ရတယ်။
အဲဒီကနေ ရေမွှေး ၃ မျိုး ၀ယ်ဖြစ်တယ်။ ဘာစိတ်ကူးပေါက်လို့ဒီလို ၀ယ်ဖြစ်သွားလဲ ကိုယ်ဟာ ကိုယ်တောင် အသေအချာ မသိဘူး။ အင်း.. ရေမွှေးလည်း ကြိုက်၊ ရေမွှေးလည်း အမြဲ သုံးတတ်သူ တစ်ယောက် ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့ သက်ရောက်မှု့ ကြောင့် လားတော့ မသိဘူး။ တကယ်ဆို ရေမွှေးကို မသုံးဖြစ် သလောက်ပါပဲ။ တစ်ခါတလေ မှသာ သုံးဖြစ်တယ်။ ဒါတောင် သုံးသင့်တယ် ပြောခဲ့လို့ ။ အခုတော့ အကျင့် ဖြစ်အောင် စမ်းသုံးကြည့်မယ် စိတ်ကူးပြီး အနံ့ခံနိုင်မယ် ထင်တာလေးတွေ ၀ယ်လာလိုက်တယ်။ တမျိုး မကြိုက်၊ နောက်တမျိုး ပြောင်းသုံးလို့ရတာပေါ့။
ရေမွှေးဝယ်ပြီး အိမ်မပြန်ချင်သေးတာနဲ့Bugis Junction ရောက်ဖြစ်တယ်။ အင်္ကျီတစ်ထည် ၀ယ်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ Bugis ကနေ CityHall ကို လမ်းလျှောက်သွား၊ “အင်းလေး” ဆိုင်မှာ ညစာစားဖြစ်တယ်။ ခေါင်းကိုက်နေလို့သိပ်မစားနိုင်ဘူး။ ညစာစားပြီး အိမ်မပြန်ကြသေးပဲ Raffle ဘက် လမ်းလျှောက်သွားပြီး မြက်ခင်းစိမ်းတွေ နားမှာ ခနထိုင်၊ တောင်ရောက် မြောက်ရောက် စကားတွေ ပြောလို့အိမ်ပြန်လာတဲ့ အချိန်မှာ ည ၁၁ နာရီ ခွဲလောက်ရှိနေပြီ။ အဲဒီနေ့ က ထူးထူးဆန်းဆန်း မိုးကောင်းကင်တစ်ခုလုံး ပြာလဲ့ပြီး ကြယ်တွေ လတွေ ကြည်လင်လို့ ၊ မြက်ခင်းစပ်မှာ ထိုင်ပြီး ကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့်ရတာ ကြည့်လို့အတော်လေး ကောင်းတယ်။
စနေညက အိပ်တာ အတော်လေး နောက်ကျပေမယ့် တနင်္ဂနွေမနက်ရောက်တော့ ပုံမှန်အတိုင်း ၇ နာရီ မထိုးခင် အချိန်ပဲ နိုးလာတယ်။ ပြန်အိပ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် အိပ်ချင်စိတ်မရှိတာနဲ့ဆက်မအိပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ စကားတွေ ပြောဖြစ်တယ်။ စကားပြောပြီး နေ့ လယ်မှာ အပြင်ခန ထွက်လို့ခေါက်ဆွဲ ၀ယ်စားတယ်။ စားလို့မကောင်းဘူး။ အ၀တ်လျှော်ဖို့ဆပ်ပြာရည် နဲ့လို တာတစ်ချို့ဝယ်တယ်။ လမ်းကြုံတာနဲ့သစ်သီးတွေ ( သရက်သီး၊ မင်းဂွတ်သီး နဲ့ငှက်ပျော်သီး) ၀ယ်လာလိုက်တယ်။ နောက်တစ်ပတ်မှာ ဒူးရင်းသီး ၀ယ်စားမယ် စိတ်ကူးတယ်။ စက်နဲ့ ရော၊ လက်နဲ့ ရော တစ်ပတ်စာ လျှော်စရာ အ၀တ်တွေ လျှော်တယ်။ ပြီးတော့ စာဖတ်၊ သီချင်းနားထောင်ပြီး နားနားနေနေပဲ နေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 7/14/2008 04:55:00 PM3comments
Posted by Nay Nay Naing at 7/12/2008 02:20:00 AM2comments
I Can't Smile Without You - Flash for you
Posted by Nay Nay Naing at 7/11/2008 04:53:00 PM4comments
Posted by Nay Nay Naing at 7/11/2008 10:46:00 AM0comments
"Opera 9.5 and Firefox 3" လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး Opera နဲ့Firefox ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက် တွေကို နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရ အသေးစိတ် နှိုင်းယှဉ်ရေးသားမလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ခုရက်ပိုင်း ဒီ Browser နှစ်ခုလုံးကို အသုံးပြုဖြစ်နေတဲ့ အတွက် အခုလို နာမည်တတ်လိုက်တာပါ။ အသုံးပြုရင်း သတိထားမိတဲ့ အသေးအဖွဲလေးတွေကို ရေးမယ်လေ။ အခုဆို ကျွန်မရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ IE7, Firefox3နဲ့Opera 9.5 ကို သွင်းထားပါတယ်။ အလုပ်မှာ သုံးတဲ့ ကွန်ပြူတာမှာဆို Safari 3.1 ပါ တောင်သွင်းထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်က အဓိက သုံးဖြစ်တာ Firefox နဲ့IE ပါ။ အခုရက်ပိုင်းတော့ Opera ကို အတော်လေး သုံးဖြစ်တယ်။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အခု အသစ်ထွက်လာတဲ့ Firefox3ကို သုံးတဲ့အခါ မှာ Airal font နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာလုံးတွေဆို ခပ်ထူထူ စာလုံးကြီးကြီးနဲ့ပြနေတဲ့အတွက် ကျွန်မ မျက်စိထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးနဲ့ကြည့်ရတာ လုံးဝ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေပါတယ်။ (Default font ကို ဇော်ဂျီ ပြောင်းထားတာကြောင့် အဲလို ဖြစ်တာထင်တယ်။ အရင် Firefox2မှာ တုန်းကလည်း အဲဒီလို ပြောင်းထားပေမယ့် ခုလိုမဖြစ်ဘူး အားလုံး အဆင်ပြေတယ်။ ) တခြားသူတွေ ဇော်ဂျီကို default font ထားတဲ့သူတွေ အဲ့လို ဖြစ်မဖြစ် မသိဘူး။ ကျွန်မ အသုံးပြုတဲ့ ကွန်ပြူတာ တိုင်းမှာ အဲဒီလိုပဲ အမြဲဖြစ်နေတယ်။ ဖြစ်တာကလည်း Airal Font တစ်ခုတည်းပါ။ တခြား Font တွေကို စမ်းကြည့်တော့ အဆင်ပြေပြေ မြင်ရတယ်။ ဆိုးတာက Website တွေအတော်များများက Arial Font ပဲ သုံးကြတယ်လေ။
ဒါဟာ တချိန်လုံး နီးပါး Google လုပ်နေတတ်တဲ့ ကျွန်မ အတွက် ပြဿနာကြီးတရပ်လို ဖြစ်သွားပါတယ်။ Google က Search Result တွေ ကြည့်ရတဲ့ အခါ လုံးဝ အဆင်မပြေတော့ဘူး။ ပုံမှန်ဆို Google Search Result မှာ ကိုယ်ရှာတဲ့ စာလုံးကို Bold နဲ့ပြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအခါတော့ အကုန်လုံးက Bold တွေလို ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ဘာရှာတာလဲ ဆိုတာ မမြင်ရတော့ဘူး။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့ စာလုံးတွေရှာတဲ့ အခါမှာ အတော်လေး စိတ်ပျက်ရတယ်။
Opera 9.5 and Firefox3ဆိုတဲ့စာလုံးတွေ ကို Firefox3ကို သုံးပြီး Google News မှာ ရှာတဲ့အခါ
Opera 9.5 and Firefox3ဆိုတဲ့စာလုံးတွေကို Opera 9.5 ကို သုံးပြီး Google News မှာ ရှာတဲ့အခါ
Firefox မှာ Google လုပ်ရတာ အဆင်မပြေတာနဲ့တခြား ဘယ်ဘရောက်ဇာကို သုံးရင်ကောင်းမလဲ တွေးရတော့တာပေါ့။ IE7နဲ့Safari ကို အဓိက Browser အနေနဲ့မသုံးချင်တာနဲ့Opera 9.5 ကို သုံးကြည့်ဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ညွှန်းတာကြောင့်လည်း ပါတယ်။ သုံးရင်းနဲ့အတော်လေး အဆင်ပြေတာကို တွေ့ ရတယ်။ အရင်က Opera ကို ကောင်းမှန်းသိပေမယ့် မသုံးဖြစ်တာက Opera မှာ မြန်မာစာတွေ မမြင်ရတာကြောင့်ပါ။ ကျွန်မ က မြန်မာစာ (ဇော်ဂျီ) နဲ့ရေးထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေကို အချိန်ရတိုင်း သွားဖတ်လေရှိတဲ့ အတွက် Opera ကို သုံးဖို့အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ အခု အသစ်ထွက်လာတဲ့ Opera 9.5 က စလို့ဇော်ဂျီမြန်မာ ယူနီကုတ်ကို မြင်ရပါပြီ။ ဒါကြောင့် အခုရက်ပိုင်း Opera ကို အလုပ်ကိစ္စ မဟုတ်ပဲ Personal Web Browsing လုပ်တဲ့ အခါ၊ Google လုပ်တဲ့အခါတွေမှာ အတော်လေး သုံးဖြစ်နေပါတယ်။ အလုပ်အတွက်ကတော့ IE ကို ပစ်ပယ်လို့မရပြန်ဘူး။ Opera 9.5 ကစပြီး ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတာတွေကို ဖတ်တာ အဆင်ပြေသွားပေမယ့်၊ ရေးတဲ့အခါမှာတော့ တခါတလေမှာ အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ အခုအချိန်အထိ ဇော်ဂျီ မြန်မာစာအတွက် အကောင်းဆုံး Browser ကို ပြောပါဆို Firefox လို့ ပဲ ပြောရအုံးမှာ ပါပဲ။ ကိုယ်ဘာလုပ်မယ် ဆိုတဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး Firefox3နဲ့Opera 9.51 တစ်ခုခုကို အဓိက Browser အဖြစ် အသုံးပြုဖြစ်နေပါတယ်။
* အခုလက်ရှိ 3rd July မှာ ထွက်တဲ့ Opera 9.51 ကို အသုံးပြုနေပါတယ်။
Something about Firefox3and Opera 9.5 ..
Firefox3vs. Opera 9.5 - GeeksToGo
Security Features in FireFox3and Opera 9.5 - GeeksToGo
Opera 9.5 gives Firefox3a run for its money - Linux
Opera 9.5 is better than Firefox3- Riadocs
Browser war : Firefox3vs Opera 95
Firefox3and Opera 9.5: Isn’t choice fun?
Posted by Nay Nay Naing at 7/09/2008 05:40:00 PM 12 comments
မနှစ်က မွေးနေ့ မှာ လက်ဆောင်အနေနဲ့ ရခဲ့တဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ စာသားတွေပါတဲ့ ခွက်ကလေးကို နှမျောတာနဲ့ထုတ်မသုံးပဲ အမှတ်တရ အနေနဲ့သိမ်းထားဖြစ်ခဲ့တယ်။ အရွယ်အစားက သာမန်ထက် နည်းနည်းပိုကြီးတယ်။ မသုံးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ အရောင်က အဖြူလေးမို့ခနလေး ညစ်ပေသွားမှာ စိုးရိမ်တာလဲ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 07-07-2008 မှာ ဒီခွက်ကို အသုံးပြုတော့မယ် ဆုံးဖြတ်ပြီး စတင် အသုံးပြုဖြစ်သွားတယ်။ ပစ္စည်း တစ်ခုကို သိမ်းထားတာထက်စာရင် အသုံးပြုလိုက်တာက ပိုပြီး ကောင်းမှာပါ။ ပျက်ဆီးသွားတဲ့အခါလည်း ပျက်ချိန်တန်လို့ပျက်သွားတယ် မှတ်လိုက်တာပေါ့။ စိတ်ကလေး ထားတတ်အောင် နေမှ။ အင်း... ဒီခွက်လေး သုံးဖြစ်နေတော့ ရေသောက်တိုင်း၊ အအေးသောက်တိုင်း အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာသားတွေလဲ အမြဲ မြင်နေရာတာ တမျိုးကောင်းပါတယ်။ ခုရက်ပိုင်း ရာသီဥတုက ပူတော့ ရေတွေ၊ အအေးတွေ အမြဲ သောက်ဖြစ်နေတယ်...
I wish you PEACE....Today and Always!!
Other Links : A Picture Of Peace - Story
Posted by Nay Nay Naing at 7/08/2008 11:15:00 PM3comments